China Azụmahịa Yard China Manufacturers & Suppliers & Factory
Azụmahịa Yard - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 18 Ngwaahịa maka Azụmahịa Yard)
25W Mpaghara Yard Mgbagwoju anya nke anyanwụ dị na IP65
Ala anyị na- enwu gbaa n'èzí nwere oghere ndị dị na 21 watt na 4000 lumens nke ìhè ọkụ. Ulo Azụmahịa a ebubo otu n'ime ụbọchị 1 zuru anyanwụ na ebubo na ihu igwe, mmiri ozuzo, igwe ojii na snow! 25W Anyanwụ Atụmatụ Pụrụ Iche Mgbasa Ozi Posts nwere ike ịgosi na ugwu n'elu ogwe dị gị. Ejiri nke ọma weere ìhè...
20W Anyanwụ Yard Light na-acha na Dawn
Nke a na-eme ihe niile a na-eme n'ime anyanwụ Soviet Yard Decorations ka ha wee banye n'elu ogwe dị. Ìhè anyanwụ na Ngbanwe dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche ìhè anyanwụ Dusk na Dawn na -adabere na SMD Diana nke na-enye 3000 Lumens na...
150w post yard yard ìhè
150w post yard yard ìhè 1. 15 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụkwa ike, na gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe dị elu 150W Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị. 3. 150W post ìhè mpaghara Elu ike na kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ. 4. Ogwe ọkụ na-acha...
50W Na-aga Yard Light Dusk To Dawn
Bbier na-enwu n'èzí zuru okè maka ụzọ ụkwụ, ụgbọala ma na-enye ntụrụndụ n'èzí maka ebe a na-ezukọ n'èzí. Nke a 50w Yad Light Dusk To Dawn na- agbanye na-akpaghị aka na mgbede na mgbapụ n'ọdịda anyanwụ. A na-eji Led Yard Light Fixtures rụọ ya na ikuku mmiri na-eguzogide na nchara na nchara na mitered,...
30W Ejiri Post Yard Light Dusk To Dawn
Nke a dugara N'èzí Light Posts e mere maka n'èzí osisi post mounts na gosiri maka mputa mmiri echichi na Dugara N'èzí Light mgbede Iji Dawn a na-eji ìhè gị driveway na n'èzí ụzọ. Eji ya na -emegide ihu igwe na-eguzogide ọgwụ, nke na-eguzogide nchara nke na-eguzogide nchara. Nke a na-adabere na aluminum...
Bbier ọhụrụ imewe Nchekwa Iju Mmiri 80W nwere banyere 9600lm ma dochie 250W MH HPS HID bulbs. Mmiri Iju Mmiri a azụ azụ na- eji ọkwọ ụgbọala IC na voltage ọsọ ọsọ bụ 120VAC / 277VAC / 240VAC. Ịnwere ike iji Ogo Mmiri a na- asọpụta n'èzí na 120VAC, 277VAC ma ọ bụ 240VAC. The n'èzí floodlight ejiri kpoo ọkụ...
Azụmahịa Yard Azụmahịa ahia Azụmahịa anyanwụ Azụmahịa na-ere ahịa Azụmahịa Ụlọ Ahịa Azụmahịa na-enwu ọkụ Ngalaba Azụmahịa 100W Azụmahịa arụpụtara Highbay